माग पूरा गर्नुको साटो, अपहरण गरेर ल्याउने? म कुनै उपचार लिने छैन : डा केसी [भिडियो]
नेपाल लाइभ शनिबार, असोज ३, २०७७, २३:२९
काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राख्दै ६ दिनयता अनसनरत डा गोविन्द केसीले आफ्नो माग पूरा गर्नुको सट्टा आफूलाई अपहरणको शैलीमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। ६ दिन पहिले जुम्लामा अनसन सुरु गरेका डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमोजोर बन्दै गएपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
शनिबार बिहान भएको स्वास्थ्य परीक्षणमा डा केसीको अवस्था कमजोर भएको र २४ घण्टा मनिटरिङमा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका थिए। तर डा केसीले आफू अनसन बसेको स्थान छोड्न मानेका थिएनन्। शनिबार साँझ उनलाई बल प्रयोग गरी प्रतिष्ठानमा लगिएको हो।
बल प्रयोग गरी प्रतिष्ठान लगिएपछि डा केसीले भनेका छन्, 'माग पूरा गर्नुको साटो जबर्जस्ती अपहरण गर्ने मलाई? म कुनै पनि उपचार इन्भेस्टिगेशन लिनेवाला छैन।'
यसैबीच डा केसीका माग पूरा गर्न र उनको जीवन रक्षाको माग गर्दै जुम्लामा स्थानीयले साँझमा दीप प्रज्वलन गरेका थिए।
डा केसीका मागहरू​
घाइतेको उपचारमा जुट्यो ३ लाख रुपैयाँ रुखबाट लडेर गम्भीर घाइते भएका म्याग्दी, रघुगंगा गाउँपालिका–३ पीप्लेका एक युवकको उपचारमा तीन लाख रुपैयाँ सहयोग जुटेको छ। यही कात्तिक... बुधबार, कात्तिक १२, २०७७